အိုးဝေ: South2North2 (စော့သ်တူး နော့သ်တူး)
တားမြစ် ထားသော... November 11, 2008 at 3:02 PM
ဟာဗျာ။ ကိုဇနိတို့ကတော့ နောက်ပြီ။ ဘယ်လိုစကားကြီးလဲ သားလည်းနားလည်ဘူးဗျ။ “မတူး မတော်”တဲ့။ အင်း.. ထားတော့။ ကြားဖြတ်ပြောမယ်။ ဒီသားလဲ နိုင်ဂျန်ဂါး စားချင်တယ်ဗျ။
ခေတ်စားတာမဟုတ်ပါ ခင်ဗျာ။ ခေတ်ကြီးက တောင်းဆိုတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိုးခါးတွေပဲ ရွာသဗျ။ အခါးကြိုက်တတ်ရင်တော့ ပူဆာစရာမလိုပါလို့ ထင်မိသဗျာ။
မရောက်တာလည်း အတော်ကြာသွားပါတယ်။ သတိထားမိတာတော့ ဒီဘလော့ဂ်က ဇနိမောင်နှံ စကားပြေ အရေးအသား တယ်ကောင်းသကိုး။
ဆယ်တန်းဖြေမဲ့ ကလေး(၁၀)ယောက်ကို မေးကြည့်မိတယ်၊ ဆယ်တန်းအောင်ရင် ဘာစားချင်လဲပေ့ါ၊ (၁၀)ယောက်လုံးက နိုင်ဂျန်ဂါး စားချင်တယ်။ ဘွဲ့ရလူငယ်(၁၀)မေးတော့ လဲ(၁၀)ယောက်လုံး နိုင်ဂျန်ဂါး စားချင်တာပါပဲ၊ မိုးမွန်နေအောင် ပညာတတ်တဲ့ Ph.D (၁၀)ယောက်ကို မေးတော့လည်း နိုင်ဂျန်ဂါး ပဲကြိုက်တယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ သိပ်ဝေးဝေး မကြည့်တော့ပါဘူး ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ နောက် ငါးနှစ်ဆိုရင် ပညာတတ်တွေ ကုန်းကောက်စရာ တောင်ကျန်မလားဘဲ။ (ကျွန်တော့်အတွေး သက်သက်ပါ)
Ko Paw November 11, 2008 at 4:10 PM
ကိုဇနိလည်း ကျနော့်လိုဘဲ ဖြစ်နေပြီထင်ပ။
South က အမှန်တော့ Mouth နဲ့ ကာရန်တူ ရမှာလေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်လည်း ဗမာပီပီ အဲဒီလိုအသံထွက်ရမှာ အားနာတော့ “ဆော့သ်” လို့ မှား မှား အသံထွက်တတ်တယ်။ သြော်...ယဉ်ကျေးမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု။
မဇနိ November 11, 2008 at 4:33 PM
အကိုကြီး ကိုပေါပြောသွားတာ ဟုတ်တယ်။ ယဉ်ကျေးမှု ယဉ်ကျေးမှု။ စိတ်မှာစွဲကပ်နေတာ အမှန်ပါပဲ။ Narita Airport ကို သွားဖို့ Yokohama မှာ Limousine Bus လက်မှတ်ဝယ်တုန်းက အကြောင်းလေးနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလို့ပါ။ ကိုယ်သုံးမည့်လေကြောင်းလိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး North Wing၊ South Wing ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတော့ လက်မှတ်ဝယ်တဲ့အခါ သူတို့က မေးပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုစွဲကပ်နေတဲ့ ကျွန်မက ကိုဇနိလိုပဲ အသံထွက်မိတော့ ပြန်မေးခံရတယ်။ သူကတော့ ပီပီသသကြီးအသံထွက်မေးလိုက်တဲ့အခါ ကြောင်နေသေးတယ်။ နောက်မှ သြော် သူတို့မှာ အိုးတိုးအမ်းတမ်းဖြစ်စရာ အယူမှမရှိတာလို့ သတိရပြီး ကိုယ်လည်း သူ့လိုလိုက်ပြောမှ လက်မှတ်ဝယ်တာ အဆင်ပြေဖူးပါတယ်။
PAUK November 11, 2008 at 5:20 PM
မတူးမတော် နဲ့ မတော်တရော် ဘာကွာပါသလဲ..
စုံစီနဖာကိ်ု အနာလိုက်ဇ် လုပ်တော့ ဘယ်လိုနေမလဲ...
Republic November 11, 2008 at 6:04 PM
ကိုနိ စာလေးဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ် ၊၊ ကျနော်လည်း အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့ပါ ကိုနိရေ ၊၊ခုလိုစာလေးတွေဖတ်မှ မျက်နှာက အသက်ဝင် လာတော့တယ် ၊၊ဒီပုံစံအတိုင်းဆို
ကျနော်တို့တွေ အသက်တိုဖို့ ကျိန်းသေပီဗျာ ၊၊ကိုနိကိုလည်းသတိရပါတယ် ၊၊ မမကွိ ရောတူတူ ပါပဲ ၊၊
Moe Cho Thinn November 11, 2008 at 7:31 PM
ကိုနိစာဖတ်ပြီး တောင်တောင်မြောက်မြောက် စဉ်းစားပြီး ပြုံးမိတယ်။
အသံနဲ့ပတ်သက်လို့ ငယ်ငယ်က မောင်လေးက အမေ့ကို ပူဆာတယ်။ လှဆန်းယဉ် ဘောင်းဘီ ၀ယ်ပေး တဲ့။ အမေကလဲ အေး အေးဆိုပြီး ခပ်အေးအေးပဲ နေတယ်။ မောင်လေးကလဲ လှဆန်းယဉ် ၀ယ်ပေးပါဆို ဆိုပြီး ထပ် ထပ်ပြောတော့ အမေက လဆန်းမှ ၀ယ်ပေးရမှာ မဟုတ်ဘူးလား တဲ့။ လှဆန်းယဉ် ဘောင်းဘီဆိုတာကို အမေက လဆန်းရင် ဘောင်းဘီ ၀ယ်ပေးရမှာ ထင်နေတာ။ လှဆန်းယဉ်ဆိုတဲ့ အားကစား ဘောင်းဘီရှိမှန်း အမေမှ မသိဘဲကိုး။
ကိုနိမေးတဲ့ ဘိုဘိုဆိုတာ အမေ မာ့ မြေး မဟုတ်ပါဘူး။ အမေရိကားမှာနေတဲ့ အမတို့ မိတ်ဆွေ တယောက်ပါ။
khin oo may November 11, 2008 at 8:58 PM
kom: မတုးူးမတော်။ဆိုတာ (မတော်မတဲ့)
kom: တောင်တောင်မြောက်မြောက်( တောင်၂ မြောက်၂)
Yu Wa Yi November 12, 2008 at 2:31 PM
I read mountain mountain monkey monkey, zi2(two ni).
sorry, i wrote ni2.
Ko Paw November 12, 2008 at 6:40 PM
ကွန်မင့်တွေလာဖတ်ရင်း အောက်ဆုံးမှာ ယုဝရီ မှားပုံလေးကို မြင်ရတော့ ကျနော့်တယောက်တည်း ရယ်လိုက်ရသေး။
nu-san November 14, 2008 at 6:53 PM
ကိုဇနိက မဇနိကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့.. အဟိ.. အမှန်တော့ အိုးဝေကို အဓိက လာလည်ဖြစ်တာက မဇနိကြောင့်ပါ.. ကိုဇနိတုန်းကဆို စာလာဖတ်ပေမယ့် comment တွေ ဘာတွေကျ မရေးဖြစ်ဘူး.. မဇနိနဲ့ကျတော့ ခင်တယ်.. (အညာလာလည်ရင် လွယ်အိတ်ချိတ်ချင်လို့.. စကားခင်းနေတာ.. :D) မအားလို့ မလာဖြစ်ရင်တောင် ပို့စ်တွေ မှတ်ထားပြီး အခုလို အားချိန်မှာ အကြွေးလာဆပ်တာပေါ့.. :D
ဘာသာစကားသင်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောလိုက်ဦးမယ်.. အမလည်း ဒီမှာ ကိုယ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ ဆရာမတို့နဲ့စကားပြောရင် အဆင်ကိုပြေလို့.. အဲဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟုတ်လှပြီအောက်မေ့တာ... အပြင်က တခြားလူတွေနဲ့ စကားပြောရင် ဘာတွေပြောမှန်းလည်း မသိဘူး.. မြန်လည်းမြန် ပြီးတော့ ကိုယ်မသိတဲ့စကားတွေ သုံးတာ များသလိုပဲ.. မကျေနပ်တာနဲ့ ဆရာမကို မေးတယ်.. ဆရာမနဲ့စကားပြောရင် ပြောနိုင်ပြီး သူများပြောရင် ဘာလို့ နားမလည်တာလည်း မသိဘူးလို့ မေးတော့ ဆရာမကရော သူငယ်ချင်းကရော ပြောတယ်.. နင်တို့ ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာ ငါတို့က သိပြီးသားတဲ့.. နင်တို့ နားလည်တဲ့ စကားမျိုးကို ရွေးပြောပေးတာတဲ့.. တခါတလေဆို အမတို့ကို ပြောတဲ့စကားလုံးအသုံးက သူတို့ဆီက ကလေးတွေကို သုံးတဲ့စကားလို အလွယ်ဟာတွေ ရွေးသုံးတာတဲ့... အဲဒီတော့မှပဲ ကိုယ်လည်း အခြေအနေမှန် သိသွားတော့တယ်.. အဟီး.. :D